काठमाडौंमा भर्खरै ३६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टी र थप एकको मृ’त्यु भएपछी अचानक एस्तो सुचना जारी! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा भर्खरै ३६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टी र थप एकको मृ’त्यु भएपछी अचानक एस्तो सुचना जारी!
सशस्त्र प्रहरी बल(एपीएफ)का काठमाडौं र भक्तपुरमा कार्यरत ३६ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । डिआइजी अर्यालका अनुसार भक्तपुरको दुवाकोटस्थित गुहेश्वरी गणमा २० जना र निलबाराही गण कीर्तिपुरमा कार्यरत १६ जना प्रहरीमा काेराेना देखिएको हो । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले काेराेना संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरे ।गुहेश्वरी गणमा कार्यरत संक्रमित प्रहरी सिमा क्षेत्रमा खटिएर गण फर्किएका थिए । सिमा सिल गर्ने क्रममा काठमाडौंबाट उनीहरु तराईका विभिन्न जिल्लामा गएका थिए ।
त्यस्तै निलबाराही गणमा कार्यरत पनि उपत्यका बाहिरबाट भर्खरैमात्र फर्किएका हुन् । संक्रमितहरुलाई आइसोलेसेनमा पठाउने तयारी गरिएकाे प्रवक्ता अर्यालले बताए । त्यस्तैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको बलुम्बीस्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत ७७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौं आएपछि ती वृद्धले कोरोना परीक्षणका लागि वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा स्वाब दिएका थिए। रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ आएपछि सुरुमा उनी ग्रिनसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए।